Maitiro ekutenderera vhidhiyo pane iyo iPhone | IPhone nhau
Ignatius Room | | IPhone maapplication, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Smart nhare mbozha, inonyatso kuzivikanwa semafoni emafoni, ave iwo mashandisiro anoshandiswa zvakanyanya nevashandisi vese ku chengeta akakosha nguva, zvachose ichisiya macompact kamera padivi, kunyangwe iyo yekupedzisira ichitipa yakanyanya kukwirisa mwenje mazinga, yakanakira apo patinoda kutora mifananidzo mune yakaderera mwenje.
Iko kumhanyisa kunogara kwakaipa vanachipangamazano uye zvirokwazvo pane imwe nhambo iwe waifanirwa kubvisa nekukurumidza iyo iPhone muhomwe yako uye wotanga kurekodha chiitiko usingazive kuti kutarisisa kwaro kwanga kusiri kwakanyatsokwana, uye mufananidzo wakabuda zvakanaka neimwe nzira yakatenderedza kana divi. Muzviitiko izvi, kana iwe uchida kuziva kutenderera sei vhidhiyo Tinogona kushandisa mashandisiro atinokuratidza pazasi.
Asi ichi chingave chisiri icho chete chikonzero nei tingangoda kutenderedza vhidhiyo, asi zvinogona zvakare kunge kuti isu tinowana vhidhiyo yakanyorwa isingatarisike zvakanaka pachinzvimbo chatakanyora, ichitimanikidza kuitenderera kana tichida kuti vhidhiyo mhedzisiro ive yakakwana. MuApp Store tinogona kuwana huwandu hukuru hwezvishandiso zvinotibvumidza kuti tiite izvi, tichigara tichichengeta resolution imwechete uye tisingachinje mhando yevhidhiyo. Pano tinokuratidza iyo Zvakanakisa kunyorera kutenderera mavhidhiyo kubva ku iPhone yedu.
1 iMovie kutenderera vhidhiyo
2 Vhidhiyo Rotate & Flip - Hapana nguva yemiganhu
3 Vhidhiyo Tenderera & Flip
4 Tenderera & Flip Vhidhiyo
5 Vhidhiyo Tenderera
6 Square Vhidhiyo
7 HD Vhidhiyo Tenderera uye Flip
8 Matipi ekutanga pakunyora mavhidhiyo
iMovie kutenderera vhidhiyo
Tichatanga runyorwa urwu nemahara kunyorera uko Apple inotipa kwete chete kuti tigadzire mavhidhiyo akanaka, asi zvakare inotibvumidza kuti tiagadzirise kuti tivacheke, tenderedze iwo ... Pane ino chiitiko chakakosha kwatiri nezve chishandiso ichi sarudzo iyo iyo yaanotipa isu panguva yekutenderera mavhidhiyo. Iko kuita yakapusa zvekuti zvinoita sekunge sarudzo iyi haipo sezvo isu tichifanira chete kuwedzera vhidhiyo iri mubvunzo uye neminwe miviri kuitenderedza kune iyo tarisiro yatiri kutsvaga. Kana izvi zvangoitwa, isu tinongofanirwa kubaya pane Done bhatani rekuchengetedza iyo nyowani mamiriro uye kutumira vhidhiyo kune yedu reel mune imwechete resolution iyo iyo yakanyorwa, zvikasadaro tinoda kurasikirwa nehunhu munzira.
Vhidhiyo Rotate & Flip - Hapana nguva yemiganhu
Dambudziko ratakatarisana naro nerudzi urwu rwekushandisa nderekuti zvakaoma kwazvo kuti unetseke nekuti vazhinji vane zita rakafanana, senge chishandiso ichi uye chinotevera. Vhidhiyo Rotate & Flip (hapana nguva miganhu), ndinosarudza kuramba ndichishandisa zita rayo muChirungu nekuti shanduro yacho inosiya zvakawanda zvekuda, inotibvumidza kushandura maitiro evhidhiyo edu mahara uye pasina imwe markup yekuwedzera. Zviripachena, iye anovandudza haana kugadzira NGO, saka mukutsinhana isu tinofanirwa kutambura nhamba yakakura yezviziviso, ma ads atinogona kubvisa nekubhadhara 3,49 euros. Inoda iOS 8.0 kana kuti gare gare uye inoenderana neiyo iPhone, iPad, uye iPod touch.
Vhidhiyo Tenderera & Flip
Ichi chishandiso, pamwe neMovie, ndiwo mafomu andinowanzo shandisa kutenderera mavhidhiyo kana ndaona kudikanwa kwekuita saizvozvo. Vhidhiyo Rotate & Flip inotibvumidza isu tenderera vhidhiyo munzira ipi neipi yatinopa girazi modhi kuti ufirize vhidhiyo yakatwasuka, chimwe chinhu icho mashoma mashandisirwo anotipa muApp Store.
Ichi chishandiso chinoenderana nezvose zviri zviviri iPhone uye iyo iPad uye iPod touch. Vhidhiyo Rotate & Flip ine mutengo wenguva dzose muApp Store ye2,29 euros uye imwe yeiyo Zvakanakisa maapplication anowanikwa pane apple app chitoro. Pasina kupokana 100% yakakurudzira iyi mhando yemamiriro. Vhidhiyo Rotate & Flip inoda iOS 8.0 kana gare gare uye inoenderana neiyo iPhone, iPad, uye iPod touch.
Vhidhiyo Tenderera & Flip - HD1,99 €
Tenderera & Flip Vhidhiyo
Tenderera & Flip Vhidhiyo inozivikanwa nekuve application yemahara iyo inotibvumidza isu kuti tichinje maitiro evhidhiyo kubva kutwasuka kusvika pakatwasuka kana zvinopesana zvinokurumidza uye nyore, pasina kana sarudzo yekumisikidza. Rotate & Flip Vhidhiyo inoda iOS 9.1 kana gare gare kuti ishande uye inoenderana neiyo iPhone, iPad, uye iPod touch.
Vhidhiyo Tenderera inotibvumidza kutenderera vhidhiyo wachi kuruboshwe kana kuruboshwe, zvichitibvumidza kutenderedza mavhidhiyo pamadhigirii makumi mapfumbamwe nemakumi masere nemakumi masere nemakumi maviri nemanyorerwo akareruka emushandisi asingade ruzivo rwakakura. Kana tangotenderedza vhidhiyo tinokwanisa kutumira mhedzisiro yakawanikwa mukugadziriswa kwayo kwepakutanga kune yedu reel kuti tigone kuigovana kana kuigadzirisa nemamwe mafomu. Vhidhiyo Rotate inowanikwa kuti utore mahara, inoda iOs 9.0 kana kuti gare gare uye inoenderana neiyo iPhone, iPad uye iPod touch.
Tenderedza Vhidhiyo - Rongedza Vhidhiyovakasununguka
Square Vhidhiyo chikumbiro icho chinowanikwa kurodha mahara muApp Store asi nezvishambadziro, ma ads atinogona kubvisa nekubhadhara 3,49 euros. Ichi chishandiso hachingotitenderi kutenderera, kuwedzera kana kurima mavhidhiyo asiwo otomatiki anotarisira kuitisa iwo Instagam kunzvenga izvo panguva yekumisikidza, sevhisi inodimbura painenge isingafanire. Square Vhidhiyo zvinodiwa ndeye iOS 7.0 kana gare gare uye inoenderana neiyo iPhone, iPad, uye iPod touch.
Square Vhidhiyo - Crop, Rotate, Zoom, Resize uye Optimize Mavhidhiyo ako e Instagramvakasununguka
HD Vhidhiyo Tenderera uye Flip
HD Vhidhiyo Rotate uye Flip inotipa isu chete uye chete mukana we otomatiki tenderera vhidhiyo nenzira kwayo izvo zvatinoda. Kamwe iko kushandurwa kwaitwa, tinogona kuendesa kunze chaiko mukugadzirisa kwayo kwekutanga kune reel yechigadzirwa chedu Ichi chishandiso Iyo ine mutengo we2,99 euros uye inoda iOS 9.0 kana kuti gare gare kuti ishande nemazvo. Uye zvakare, inoenderana neiyo iPhone, iPad uye iPod touch.
Matipi ekutanga pakunyora mavhidhiyo
Zvino chii iwe unoziva kutenderera vhidhiyo kubva kuiyo iPhone, tichaenda kukupa mamwe matipi ekutanga kuti uwane zvakanakisa kubva pane yako kamera kamera.
Vazhinji vashandisi vane iyo mania ye nyora vhidhiyo mune portrait modhi, nekuti nenzira iyi vanogona kutora zvimwe zvemukati vasingasuduruka kubva pavari, asi kana zvasvika pakuratidzira pakombuta yedu kana paterevhizheni tinoona marasiro atakaita akawanda ezvimwe zvirimo zvaive munzvimbo kana tingadai takazvinyora zvakatwasuka. Saka zvinogara zvichikurudzirwa kuti ubve panzvimbo zvishoma kuti ukwanise kutora rumwe ruzivo rwakajeka.
Kana isu kazhinji bvisa kutenderera kwechidzitiro che iPhone yedu Uye kana tichiziva kuti tichafanirwa kushandisa kamera, zvakanakisa kuita sarudzo iyi kuitira kudzivirira izvo zvachose mavhidhiyo ese atinorekodha akanyorwa zvakatwasuka.
Usashandise zoom yedhijitari. Iyo zoom yedhijitari haishandisi malenzi kuti iswedere padyo nechinhu, asi zvazvinoita kudigital kuwedzera mufananidzo watiri kuona pamwe nekukonzeresa kurasikirwa kwehunhu. Kana iwe uchida kunyora chinhu padhuze, swedera padhuze sezvaunonyora, ndiyo yakanakisa zoom yatinogona kuwana parizvino pane mafoni.
Usambofa wakanyora wakatarisana nezuva kana kwakananga chiedza, sezvo chinhu chega chatichazowana ndechekunyora zvinyorwa zvisingatore chero chinhu chevanhu kana zvinhu zvinoonekwa muvhidhiyo. Nyanzvi yemavhidhiyo makamera akagadzirirwa aya marudzi emamiriro ezvinhu asi kwete ayo emafoni efoni, zvisinei kuti iPhone 7 Plus inogona kunge iri sei.
Isu tinovimba kuti mushure memazano edu uye kuraira iwe hauchisina kusahadzika nezve kutenderera sei vhidhiyo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Maitiro ekutenderera vhidhiyo pane iPhone
Kana iwe ukashandisa WhatsApp kutumira vhidhiyo, inokupa iwe sarudzo yekutenderera iyo.
Mamwe mafoto uye vhidhiyo yeanofungidzirwa iPhone 8 yakarova mambure